News | PRO-X Software Solution
In 2019, we still don’t really know what to do about fake news. With nothing to disincentivize viral hyperpartisan headlines and other exercises in confirmation bias, online misinformation seems to run as rampant as ever. It’satricky problem, particularly because it’s one that requires the readers most drawn to too outrageous to be true news to c...
Visits : 3438
🔷 Installation လုပ်ရန်မလိုခြင်းအကယ်၍ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ လက်ရှိ Software သုံးနေတယ် ဆိုရင် စက်တစ်လုံးတိုးတဲ့အခါ၊ branch တစ်ခု ထပ်တိုးတဲ့အခါ Installation လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့အတွက် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန် ဖြစ်နေပါပြီ။Web Application တွေမှာတော့ အဲ့လို လုပ်နေစရာ မလိုပါဘူး။🔷 လုပ်ငန်းရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့ချပေးခြင်းမိမိရဲ့လုပ်ငန်း၊ ထုတ်ကုန်အသစ်အကြောင်းကိ...
Visits : 3482
လူကြီးမင်း၏ လုပ်ငန်းအတွက် promotion ကာလလေးမှာ website ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ 20% discount + လုပ်ငန်းအမည်ဖြင့် Mail Account (5) ခု ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။📅⏰Limited Time Offer⏰📅📞+95 9778915075, +95 9954915075✉️[email protected]🌐https://proxsoftwaresolution.com
Visits : 3628
PRO POS တွင် ဆိုင်ခွဲဖွင့်ရန် အလွန် လွယ်ကူခြင်း
လူကြီးမင်းတို့၏ ကြိုးစားမှုနှင့် အတူ လုပ်ငန်း အောင်မြင်လာသောအခါ ဈေးကွက်ကို ထပ်ချဲ့ဖို့အတွက် လိုအပ်လာပါသည်။ ထိုအခါ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရန်အတွက် ဆိုင်ခွဲများ ဖွင့်၍ ဈေးကွက်တွင် နေရာ ပိုရဖို့ ကြိုးစားကြရပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် PRO POS ကို အသုံးပြုထားတယ်ဆိုရင်တော့ ထိုသို့ ဈေးကွက်ကို ချဲ့ထွင်သောအခါ၊ ဆိုင်ခွဲများ ဖွင့်လှစ်သော အခါ...
Visits : 4045
PRO POS ၏ Shortcuts ကို ဘယ်လို အသုံးပြုရတာလဲ
PRO POS ၏ Shortcuts ကို ဘယ်လို အသုံးပြုရတာလဲ။Shortcuts ဆိုတာက ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှု အဆင့်ဆင့်တွေကို ပိုမို လျှင်မြန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဖန်တီးထားသော အရာဖြစ်ပါသည်။PRO POS ၏ အရောင်းစနစ်တွင် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ Shortcuts များကို သက်မှတ်ပြီး အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။✅PRO POS တွင် Shortcuts ထား၍ အသုံးပြုနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကတော့Focus add/sea...
43 - 48 of ( 61 ) records